Hogaamiyayaasha Boko Xaraam oo la raadinayo - BBC News Somali
Hogaamiyayaasha Boko Xaraam oo la raadinayo
29 Oktoobar 2015
Image caption Liiska dadka la doonayo.
Tani waa markii ugu horreysay ee ciidammadu ay soo daabacaan sawirro dad tiro badan oo lagu tuhunsan yahay inay yihiin hoggaamiyeyaal Boko Haram.
liiska sawirrada faraha badan ee boqolka qof ka kooban oo meel la isugu geeyay, ayaa dadweynaha loogu soo bandhigay farriimo qoraal ah oo loogu kala diray luuqado kala duwan oo lagaga hadlayo waddanka Nigeria, oo inta badan laga isticmaalo gobolka ay saameynta ugu weyn ku yeelatay weerarrada mintidiintu.
Ciidammadu ma sheegin sida ay ugu suurta gashay inay aqoonsadaan dadkaas la tuhunsan yahay, laakiin sawirradu waxay u muuqdeen in laga keenay meelo badan oo Boko Haram propaganda ku faafsato.
Waxaa kaloo dadweynaha loo sheegay numbarro ay soo wici karaan haddii ay arkaan qof ka mid ah dadka la tuhunsan yahay oo maraya meel ka mid ah dalka Nigeria.
Ciidammada waxay sheegeen inay waddanka oo dhan u qaybin doonaan sawirro dadka la doonayo in la soo qabto si loo sahlo in la daba galo.
Ciidammada Nigeria, waxaa dhici karta in culays uga yimid sidii ay u fulin lahaayeen waqtigii loogu talagalay ee madaxweyne Mohammadu Buhari u qabtay inay Boko Haram u jebiyaan muddo saddex bilood gudahood ah.
Kooxdani waxay qaadday weerarro ay ku dishay boqollaal qof, ayna ku barakaceen malaayiin kale muddo lix sanno ah oo ay wadeen dagaal dhiig badani ku daatay si ay dowlad islaami ah uga dhistaan woqooyiga Nigeria.